wararka maanta-arlaadii.net » Cristiano Ronaldo oo Loo Magacaabay Laacibka Sanadka Adduunka iyo Faah Faahin Ku Saabsan Abaal marinada Kale La Bixiyay Sawiro.
Ururka Kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa soo qaban qaabiyay Xaflad heer sare oo lagu marti qaaday 1,100 Marti Sharaf ah islamarkasna soconaysay muddo 90 daqiiqadood ayaa lagu qabtay magaalada Zurich ee xarunta FIFA.
Xafladdaan oo xiriiriye inay ka noqoto loogu marti qaaday gabadha saxafiyadda ah ee lagu magacaabo Kate Abdo una dhalatay Britain oo uu wehlinayay Heesaaga reer Switzerland ee lagu magacaabo Bastian Baker ayaa lagu bixiyay abaal marino kala duwan sanadkii lasoo dhaafay 2014 ee dhanka kubadda cagta Raga iyo haweenka intaba lagu bixiyay.
Cristiano Ronaldo oo Markii 3-aad Ku Guuleystay Laacibka Sanadka Ballon d’Or iyo Faah Faahin Xafladdii Abaal Marinada FIFA ay Bixinaysay.
Weeraryahanka kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa loo magacaabay ciyaaryahanka ugu wanaagsan sanadkii tagay 2014 kadib markii uu ku guuleystay abaal marinta Fifa Ballon d’Or.
Kabtanka xulka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa kaga adkaaday abaal marintaan xidiga afarta jeer ku guuleystay ciyaaryahanka sanadka Lionel Messi,iyo goolhayaha xulka Jarmalka u qaaday koobkii adduunka sanadkii tagay 2014 Manuel Neuer.
Waa markii 2-aad oo xiriir ah oo uu ku guuleysanayo laaciba ugu wanaagsan sanadka adduunka waana markiisa 3-aad isagoo horey ugu guuleystay sanadihiii 2008,2013 iyo caawa oo la siiyay sanadkii tagay 2014.
Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay 37.66% codadkii la qaaday waxayna u ahayd markii 3-aad uu qaado abaal marintaan halka Lionel Messi oo afar jeer horey ugu guuleystay uu ka hellay 15.76% wuxuuna si dirqi ah kaga hor maray goolhayaha xulka Jarmalka Manuel Neuer oo isna hellay codad dhan 15.72% wuxuuna goolhayihii Jarmalka u qaaday koobka adduunka galay kaalinta 3-aad.
Laacibka adduunka Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay 52 gool 43 kulan uu ciyaaray sanadkii lasoo dhaafay 2014 waxaana abaal marinta xidiga ugu wanaagsan siiyay weeraryahanki hore wadanka Faransiiska Thierry Henry.
“Waxaaa jeclahay inaan u mahad celiyo dhamaan inta ii codeeysay, Madaxweynahayga,Tababarahayga iyo Kooxda Real Madrid waxayna ii tahay Sanad lama ilaabaan ah inaan ku guuleysto laacibka adduunka ayuu yiri Cristiano Ronaldo.
Nadine Kessler Gabdha Ugu Wanaagsan Adduunka 2014.
Nadine Kessler oo qadka dhexe ugu ciyaarto kooxda Wolfsburg iyo xulka gabdhaha dalka jarmalka ayaa loo magacaabay oo noqotay gabadha ugu laacibsan adduunka sanadkii tagay 2014.
Gabadhaan Nadine Kessler oo 26 sanno jir ah ayaa kaga adkaatay abaal marintaan Gabadha reer Brazil ee shanta jeer noqotay laacibadda adduunka Marta iyo Gabadha Xulka Gabdhaha dalka Maraykanka ka tirsan ee Abby Wambach.
Joachim Low oo Loo Magacaabay Tababaraha Ugu Wanaagsan Adduunka ee Ragga.
Tababare Joachim Low oo xulka Jarmalka u qaaday koobka adduunka 2014 xulka jarmalka ayaa loo magacaabay macalinka ugu wanaagsan adduunka sanadkii tagay ee dhanka Ragga.
Joachim Low ayaa xulkiisa Germany 1-0 kaga badiyay finalka koobka adduunka dalka Argentina islamarkasna noqday horyaalka adduunka isagoo u suura galiyay in markii 4-aad xulka Jarmalka uu ku guuleysto koobka adduunka.
“Waxaya ii tahay sharaf weyn kadib sanad guul aan caadi ahayn aan sameeyay,waxaana jeclahay inaan u mahad celiyo dhamaan tababarayaasha Dalka Jarmalka kuwaas oo sameeyay shaqo wanaagsan soona saaray xidigo da’yar dhamaantoodana waa tababarayasha sanadka ayuu yiri Joachim Low.
Joachim Low ayaa kaga adkaaday abaal marintaan tababare Diego Simeone oo Atletico Madrid u qaaday horyaalka Spain soona gaarsiiyay finalka Champions League iyo Carlo Ancelotti oo markii 10-aad u qaaday Real Madrid koobka Champions League.
Ralf Kellermann Tababaraha Dhanka Gabdhaha Ugu Wanaagsan Adduunka.
Tababare Ralf Kellermann oo u dhashay dalka Jarmalka aya loo magacaabay oo ku guuleystay inuu noqdo tababaraha ugu wanaagsan dhanka gabdhaha sanadka 2014 kadib markii looga dhawaaqay xafladdii Fifa ay ku qabatay magaalada Zurich ee dalka Switzerland.
“Abaal marintaan waa mid timid daqiiqad la yaab leh nasiib darro kaligayga ama shaqsiyan ayaa ku guuleystay laakin waxaa idin cadeenaa in dhamaan kooxdeeyda ay ku guuleysatay ayuu yiri Ralf Kellermann.
Ralf Kellermann oo ka faa’iideysanaya munaasabaddaan ayaa tacsi u diray ciyaaryahankii qadka dhexe kooxda Wolfsburg Junior Malanda kaas oo labo maalin ka hor shil baabuur ama shil gaari ku geeriyooday.
Tababarahaan Ralf Kellermann ayaa kaga adkaatay abaal marinta macalinka ugu wanaagsan tababarayaasha kala ah Maren Meinert oo ah tababaraha xulka Juunyarka Jarmalka ee 19 jirada iyo Macalimadda dalka Japan Norio Sasaki.
GOOLKA SANADKA OO UU KU GUULEYSTAY James Rodriguez.
James Rodriguez ayaa ku guuleystay goolka ugu wanaagsan sanadka wuxuuna ku guuleystay Abaal marinta Puskas kadib gool qurux badan uu ka dhaliyay dalka Uruguay koobkii adduunka 2014.
Xidigaan James Rodriguez ayaa kaga adkaaday abaal marintaan xidiga Stephanie Roche kaas oo gool qurux badan ka dhaliyay kooxda Wexford oo ka dhisan horyaalka Irish-ka iyo gool kale uu dhaliyay Robin Van Persie.
James Rodriguez ayaa hellay 42% codadkii loo qaaday goolka ugu wanaagsan halka goolka kusoo xigay oo uu dhaliyay Stephanie Roche uu ka hellay 33%.
ABAAL MARINTA MADAXWEYNAHA SANADKA 2014.
Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta adduunka Sepp Blatter ayaa ku guuleystay abaal marinta madaxweynaha ama guddoomiyaha sanadka waxaana la sheegay in lagu siiyay abaal marintaan kadib markii uu maamul wanaagsan uu ku hogaamiyay Ururka kubadda cagta adduunka FIFA.
WARIYAHA SANADKA ADDUUNKA 2014.
Munaasabaddii ka dhacday magaalada Zurich ee dalka Switzerland halkaas oo xarun u ah ururuka kubadda cagta adduunka FIFA ayaa waxaa lagu bixiyay abaal marinta wariyaha sanadka.
Hiroshi Kagawa oo ah Wariye 89 sanno jir ah islamarkaasna 10 koob adduun tabiyay waxna ka qoray ayaa loo doortay in loo magacaabo wariyaha ugu wanaagsanaa sanadka 2014 FIFA.
Hiroshi Kagawa wuxuu u dhashay dalka Japan isagoo koobkii adduunka sanadkii lasoo dhaafay lagu qabtay Brazil oo Germany ay ku guuleysten u ahayd koobkii 10-aad ee Adduunka uu tabiyo waxna ka qoray.
XULKA UGU WANAAGSAN SANADKA 2014 FIFA.
Xiriirka kubadda Cagta adduunka FIFA ayaa soo saaray liiska xulka ugu wanaagsanaa sanadkii tagay adduunka ama 11-ka ciyaartooy ugu fiicnaa.
Fifa ayaa 11 ciyaaryahan ka xulatay ilaa 20 kun oo ciyaartooy oo adduunka ka ciyaara waxayna u aragtay in xulkaan ay ku jiraan xidigaha ugu fiican adduunka sanadkii dhamaaday 2014 waxayna kala yihiin.
Muungaaab oo Sheegay in Shacabka Gobolka iyo Dowladda Hoose ay Iska Kaashan Doonaan Nadaafadda Magaalada Muqdisho.